Oday dhaqameedyadii Garxajis oo kala socda iyo aniga oo talo la’aani daleedda I dhigtay. | Awdalpress.com
Waxa Daabacay staff-reporter on Jan 23rd, 2018 and filed under Daily Somali News, OPINION. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Marka taladu kaa qalloocdo, waxa lagu gartaa tafaraaruqa, tala xumada iyo kala hadalka. Waxanad u jabtaa dhiggaaga kale ee aad tartamayseen ama isku muuqataan. Sidaa marka aan leehay uma jeedo reer aan dhalliilayo iyo wax la mid ah, ee waa iga toosin. Waayo Garxajis waa qayb iga mid ah oo aan ehel iyo walaalo nahay, oo aan tabayo. In aan wanaaggooda arko ayaana farxaddayda ah. Ta maanta iyaga haysataana waa mid anigaba igu mudan oo aan iga maqnayn, oo weliba iyagu wayba hadlayaane, aniga afkiibaa juuqda gabay, tu ka daran ayaana I haysata.
Tartan ciyaareed amma mid siyaaso waa la kala badiyaa, sida maanta aniga iyo Garxajis la iiga badiyeyse waa mid aanan filayn. Ha la iga badiyee, sida aniga iyo Garxajis la noogu tiiq tiiqsanayo, ayaa ah waranka igu taagan ee la igu sii gugujinayo. Odayada kala hadlayaana isku wax uun bay ka hadlayaane, isma oga oo kooma ayey ku jiraan.
Mid lala yaabo miyaanay ahayn marka aad goob joog u tahay odayga 80 jirka ah oo yidhi waa in aan talo isugu nimaadno haddaan Garxajis nahay iyo ka kala hor yimid talo waa loo baahan yahay ee ma wax baan garanaynaa kkkkkk. Reerka aan ka hadlayaa ma sidaasay ahaan jireen? Waa maya.
Bal hadda muuqaalladan daawo, wax baa kaaga bixiye
Doorashadii Somaliland ka dhacday ee aan xisbiyada iyo calammada kala geddisan arkaynay, waxa ka hooseeyey beelo tartamaya, oo ka guulaystaa uu LAAN-DHEERE noqonayo, ka laga badiyaana uu GUN noqonayo. Laakiin siyaasiyiin iyo waxgarad badan ayaa is lahaa kolba wiilkii hoggaanka qabtaa inta kale ayuu xambaari, oo la ogaan maayo mid guulaystay iyo mid laga guulaystay. Wayse noqon weydey, waxana ay natiijadii noqotay in la isugu faano HADDAAN REER HEBEL nahay GARAB IYO GAASHAAN ayaan hellay oo JEEGAAN BAA LA NA YIDHAA. Xukunkana sidaa ayaan isku bed beddeli doonnaa.
Bal Suldaannadanna nala daawada.
Holaca maanta shidmayaa maaha mid la bilowday kursiga la saaray Muse Bixi iyo faan faanka oday dhaqameedkiisa, balse wax baa ka horreeyey. Waxana xusid mudan doorkii ay oday dhaqeedyada reer Somaliland ku lahaayeen doorashadii dhammaatay. Oday dhaqameedyadaasi oo aan maanta waxba ka qaban karin dagaalka ka dhex oogan labada beelood ee walaalaha ah, ee ay wiilashoodii isku dhammaanayaan. Hadalka xanafta leh ee dhallinta xabbada ku rartayna, waxa keenay hadallada dhiillada leh ee oday dhaqameedyada afkooda ka soo baxaya iyo sida ay innamadoodii ugu kala abtirinayaan, ugu kala hiillinayaan ee ugu baanayaan…..Haddii aan reer hebel nahay waxa hiillimaad innooga baahan wiilka reer hebel.
Uma baahna in aan sawirro kale amma Video kale idiin soo qabto, waayo horaad uga soo dheregteen. Sidoo kale waxba isku daalin maayo, siyaasiyiinta iyo salaadiinta heellada ku qaadayey reerkayow guulaysta.
Xanuunkaasi ay oday dhaqameedyada iyo siyaasiyiinta qaar hurgufayeen oo aan Somaliland meel keliya ku egeyn, balse caam yeelay bari iyo galbeed ayaa keenay in maanta la waayo oday amma siyaasi gurmad ka gala dhiillada dagaal ee ka jirta Somaliland. Sidaasay weliba weli ku maqan yihiin heestii lagu raashimin jiray ee ahaa REERKAYAGOW GUULEYSTA.
Somaliland maanta ceella uma qodna, cidina uma maqna, talana waxaba ay sidaa hortaallaa Muse Bixi, oo dagta ku sita taladii dalka iyo dadka ee la wadaagayey, oo uu cid kale ku aammini waayey. Waxana malaha habboon in uu talada culayskeeda dib ugu soo celiyo inta waxgaradka ah ee aan ku milmin ololayaasha qabyaaladeed, ee calool xumada ka dhex abuurtay shacabkii walaalaha ahaa, ee isku mabda’a ahaa.
Muse Bixi malaha waxa la gudboon in uu beddelo dawaladda uu ku dhisay ABAAL CELINTA, KU XUMEE, HEBEL KU TIXGELI….ee inta ka xalaasha ahi ay tahay 2, 3 ama 4. Amma aan idhaahdee dawladda aan u bixiyey HORTA KU AAR GOOSO. Oo ka ilaali reer hebel iyo xisbi hebel. Laakiin Muse doqon maahin oo marka uu sadarradaa akhriyayo wuu og yahay in qoraalka uu akhriyayaa run yahay.
Anigu markaan leehay reerkayga uun uma jeedo, ee waa mid caam ah, reer Sool, reer Saaxil, Reer Hargeysa, reer Galbeedka oo dhan. Waayo Garxajis waa innoo wada tol, dhiillada dagaal ee bariguna waa mid innagu wada taagan.
This post has been viewed 9300 times.